Rivaldo oo si xoogan kaga soo hor jeestay in kulamo qaar ee horyaala La Liga lagu ciyaaro dalka Mareykanka – Gool FM
(Spain) 08 Sept 2018. Laacibkii hore xulka qaranka Brazil Rivaldo ayaa si weyn kaga soo horjeestay hadalkii maamulka La Liga ay ku sheegeen in kulamo qaar lagu ciyaarayo dalka Mareykanka, laga bilaabo xili ciyaareedkan.
Waxaa jiray warar ku aadan in kulanka kooxaha Barcelona iyo Girona uu qeyb ka yahay kulamada lagu ciyaarayo dalka Mareykanka, kaasoo xiliyadii lasoo uu muran xoogan ka taagnaa.
“Sida ay ila tahay kulamada horyaalka La Liga ee lagu ciyaarayo dalka Mareykanka, waxaan u maleynayaa inay qalad tahay isla markaana ay dhibaateyn doonto taageerayaasha iyo ciyaartoyda Spain”.
“Kulanka Barcelona iyo Girona waa kulan Catalan Derby ah in lagu qabto dalka mareykanka, waxaan rajeenayaa in muran badan ay ka taagan tahay, sababa la xidhiidha xaaladaha siyaasadeed ee u dhexeeya Catalonia iyo Spain”.
“Aragti ahaan waxaan qabaa in kulanka Barcelona iyo Girona lagu ciyaaro dalka Spain isla markaana aanan lagu ciyaarin meel ka baxsan”.